‘हाम्रा नेता भूमिगत शक्तिको इसारामा चल्छन्’ – SLF खबर
Post published:६ बैशाख २०७६, शुक्रबार
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन कस्तो पाउनुभयो ?लेखापरीक्षण विधिमा सुधार आएको छैन । बेरुजु जति बढी देखाउन सक्यो, उति बढी लेखापरीक्षकहरू सक्षम दरिने धारणा छ । लेखापरीक्षणको उद्देश्य व्यवस्थापनलाई सहयोग होओस् भन्ने हुन्छ । हिसाब–किताब दुरुस्त होओस् भन्ने अभिप्राय हुन्छ । यतिका वर्ष लेखापरीक्षण गरिसकेपछि पनि त्यही समस्या दोहोरिनु लेखा राख्ने व्यक्ति र प्रशासकीय व्यवस्थापनको कमजोरी हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण राम्रो गरेन भन्न खोज्नुभएको हो ?आम नागरिक र करदातालाई आश्वस्त पार्न सक्नेगरी लेखापरीक्षण प्रभावकारी देखिएन । २०७४ साउनमा गरिएको खर्चलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । मानौँ लेखा व्यवस्थापकको नियत खराब थिएन, उसले सही ढंगले काम गरेको थियो । सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्न सकेन, कतिपय अवस्थामा तोकिए बमोजिमका कागजातसमेत ल्याउन सकेन । त्यस्तो कामको लेखापरीक्षण असोज वा कात्तिक मसान्तमा भएको भए व्यवस्थापनले सच्याउने अवसर पाउने थियो ।
अलि बढी परम्परागत भएको हो ?अंक मोहका कारणले कामकारबाही परम्परागत ढंगबाट माथि उठ्न सकेन । बेरुजु अंकमै देखाउनुपर्ने, जति अंकमा देखायो, उति नै प्रतिवेदन आम चर्चाको विषय हुन्छ भन्ने ठानियो । एउटै कामकारबाही २/३ ठाउँमा बेरुजु देखिएको छ । कुनै दातृ निकायबाट शोधभर्ना लिएर खर्च गर्नुपर्ने रकममा खर्च गर्दा विधि नपुर्‍याएकाले पनि बेरुजु आयो ।
अनियमितता र बेरुजुको ठूलो अंक देखाएर लोकप्रियता आर्जन गर्न खोजेको भन्न खोज्नुभएको हो ?कार्यसम्पादनमा आधारित लेखापरीक्षणका बारेमा हामीले पहिलेदेखि नै जोड दिएका हौं । कुनै कामकारबाहीको परिणाम राम्रो आएको छ भने केही सामान्य त्रुटि वा कागजात अभाव देखिए आपत्ति जनाउनु पर्दैन । किनभने प्रतिवेदन दिन ढिलाइ हुने हुनाले भएका कमी–कमजोरी सच्याउन सकिँदैन ।
लेखापरीक्षण गर्नेहरू नै विकृत भए ?लेखापरीक्षण मूलतः स्थानीय स्तरका कार्यालयहरूमा बढी हुन्छ, सोझै केन्द्रमा हेर्ने भन्ने हुँदैन । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङका भन्सार कार्यालयको सकेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गरिन्छ । लेखापरीक्षकहरूको आचरण र इमानदारीले निकै महत्त्व राख्छ । लेखापरीक्षण गराउनेकै आतिथ्य स्वीकार गर्ने परिपाटी छ ।
यस पटक महालेखापरीक्षक नै लेखापरीक्षण गर्न अमेरिकास्थित दूतावाससम्म पुग्नुभयो । तपाईंले भनेजस्तै भएको होला, त्यहाँ पनि ?महालेखापरीक्षकले कतिपय अवस्थामा आफ्नो इमानदारी र स्वच्छता प्रकट गर्न सक्नुभएको छैन । महालेखापरीक्षक स्वयं नै लेखापरीक्षणमा पुग्नु आवश्यक हुँदैन । कतिपय अवस्थामा भौतिक रूपमा गई लेखापरीक्षण गरिँदैन पनि । वित्तीय कामकारबाहीको प्रमाणको मूल्यांकन कतिपय अवस्थामा स्थान अध्ययन आवश्यक हुँदैन । परीक्षणका अन्य विधिसमेत छन् । जति बढी मानवीय सम्पर्क हुन्छ, त्यति बढी बेरुजु नदेखाउने, नरम दृष्टिकोण राख्ने वा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । उहाँ जानुभयो, आतिथ्य ग्रहण गर्नुभयो, उपहार पनि आदान–प्रदान भयो होला । कतिपय यस्तै गलत क्रियाकलाप यसपालि पनि प्रतिवेदनमा आएनन् । यस्ता क्रियाकलाप विगतमा पनि देखिएका हुन् ।
कसरी व्यवस्थित गर्ने त लेखापरीक्षण ?हामी चौमासिक प्रणालीमा छौं । एउटा चौमासिक (साउन–कात्तिक) सकिने बित्तिकै महालेखाको टोली लेखापरीक्षणमा जानुपर्छ । पहिलो चौमासिक कात्तिक मसान्तमा सकिन्छ । मंसिरमा सबै लेखापरीक्षण भए त्यस क्रममा देखिएका कमी–कमजोरी पुस–माघसम्म सच्याउन सकिन्छ । कात्तिक मसान्तमा नतिरेको रकम अर्को वर्षको फागुन मसान्तमा माग्न जानु कक्तिको युत्तिसंगत होला ? कतिपयले असल काम गर्दागर्दै भएको सामान्य त्रुटि चौमासिक लेखापरीक्षण गर्दा सुधार गर्ने अवसर मिल्छ । समानान्तर लेखापरीक्षण खर्चिलो पनि हुँदैन । सरकारलाई बिनासित्तीमा नराम्रो देखाएर कसैलाई फाइदा हुने होइन ।
प्रतिवेदनले वर्षौंदेखि एउटै प्रकृतिको बेथिति औंल्याएको छ । सरकारले सुधार गर्न किन खोज्दैन ?हामीले जहिले पनि प्रशासकीय व्यवस्थापनलाई स्थायी संस्थाका रूपमा बुझेका छौं । व्यक्ति परिवर्तन हुँदा असर पर्दोरहेछ । एउटा व्यक्तिको कार्यकालमा भएको समस्याको अर्को व्यक्ति आएर लेखापरीक्षण गर्दा उसले आफ्नो समस्या होइन भनेर बेवास्ता गर्ने परिपाटी छ । यो मानवीय स्वभाव पनि हो । अघिल्लो पालाको बेथितिमाथि पछिल्लोले सम्बोधन नगरिदिने समस्या छ ।
यस पटक पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाली सेनाको व्यापार–व्यवसायमा धेरै बेथिति भएको लेखेको छ । यसबारे के टिप्पणी छ ?व्यवसायमा सेनाको संलग्नता र सेनाभित्रको सुशासन फरक–फरक पाटा हुन् । सेनाको पहिलो काम राष्ट्रिय सुरक्षा हो । दोस्रो, सरकारले दिएको विकास निर्माणको जिम्मेवारी । विभिन्न व्यवसायमा संलग्नता उसको तेस्रो पाटो हो । सेनाले पेट्रोल पम्प, पार्टी प्यालेस, चमेना गृह र जग्गा प्लटिङजस्ता काम नगरे हुने थियो ।
यो सरकारको पहिलो वर्ष नै ठूलठूला अनियमितता सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई सरकारले अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन, किन होला ?म पनि अचम्ममा परेको छु । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको विमानमा संसदीय समितिले कैफियत देख्यो र व्यक्ति किटेरै सजाय दिनुपर्छ भन्यो । लगत्तै सरकारले अर्को छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । त्यो आयोग कहाँ गयो ? सरकारलाई नै थाहा छैन । सरकारले आफैलाई लाज लाग्नुपर्ने काम गरिरहेको छ । कतिपय विषयमा छानबिनै हुँदैन, कतिपयमा सरकार लाचार हुने गरेको छ । जस्तो— चिनी अनियमितता प्रकरणमा प्रधानमन्त्री स्वयंले लाचारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस्ता कतिपय विषय लेखापरीक्षणमा आउँदैनन् । लेखापरीक्षणले वित्तीय गतिविधि मात्रै हेर्छ ।
केन्द्रको मात्रै हैन, स्थानीय सरकारमा पनि बेथितिका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । जनताको घरदैलोको सरकारमा पनि कसरी यो रोग सर्‍यो त ?प्रकट कसको बढी हुन्छ भन्ने हो । स्थानीय सरकारको अनियमितताका गतिविधि चाँडै प्रकट हुन्छन्, आम नागरिकले देखेका हुन्छन् । सिंहदरबारको अनियमितता आम नागरिकले देखेको हुँदैन । स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण टोली गएका बेला सर्वसाधारणले समेत खबरदारी गर्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी हालिदिन्छन् । हामी अत्तालिएका पनि छौं, बर्बादै भयो कि भनेर । योभन्दा धेरै राष्ट्रलाई घात पर्ने, खास–खास व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने अनियमितता संघीय सरकारले गरिरहेको छ ।
सरकारका अनियमितता र लाचारीमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता देखिन्छ । उनीहरूमाथि कहिल्यै कारबाही हुँदैन । किन ?यसमा दुई तह हुन्छन् । एउटामा, कुनै कार्यालयको पदाधिकारी प्रकट रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन्छ । मौखिक निर्णयमात्रै गर्छ, निर्देशन दिन्छ । त्यसमा भ्रष्टाचार हुन्छ, तर उसले कुनै कागजमा हस्ताक्षर गरेको हुँदैन । हप्की–दप्की गरेर वा आफूले भनेको मान्ने मान्छे लगाएर काम गराउँछ । यस्तो व्यक्तिको नाम कहिल्यै बाहिर आउँदैन । फँस्यो भने हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति फँस्छ ।
भूमिगत शक्तिले नेपालमा गरेका अनियमितताका उदाहरण छन् ?किन नहुनु ? नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षअघि ‘स्रोत नखुलेको वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन दिन्न’ भन्यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा ‘भित्र्याउने भए स्रोत देखाऊ’ भन्नुभयो । वैदेशिक लगानी गैरकानुनी रहेको भए र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निषेध भएको प्रमाणित भए नेपाल कलंकित हुन्छ, एक व्यक्तिका कारण आमनेपाली बदनाम हुने कि नहुने भन्ने गम्भीर प्रश्न थियो ।
नक्कली भ्याट बिल पनि पहिल्यै कारबाही भएको भए फेरि ब्युँतिने थिएन कि ?पहिले कारबाही नै नभएको हैन । कतिपय मुद्दामा गए, मुद्दा जिते । आन्तरिक राजस्व विभाग फेरि सर्वोच्च गएको छ । कतिपयले सर्वोच्चबाट हारेका पनि छन् । नक्कली भ्याट बिल नतिरेका, छुट नै पाएकाहरू कमै छन् । छुट तथा मिनाहा दिने प्रयास नभएको भने हैन । आन्तरिक राजस्व विभाग वा अर्थ मन्त्रालयको प्रणाली नमिसिएसम्म यस्ता घटनाहुँदैनन् । राजस्व प्रशासन वा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले सिकाएर यस्ता घटना हुने हुन् । कतिपय बहालवाला कर्मचारीले नै सिकाइदिन्छन् । कतिपयले अवकाशपछि परामर्शदाता भएर गई कर छल्न सघाउँछन् । ती सबैफटाहा, राष्ट्रघाती र अपराधी हुन् ।
परामर्श दिनै नपाइने ?चोर्ने परामर्श दिन पाइन्छ ? अवकास प्राप्त भएपछि पनि चोरी गर्न, फटाही गर्न, कर छल्ने परामर्श दिन पाईँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले समेत परामर्श दिनेको आचारसंहिता हुन्छ । लेखापरीक्षकलाई देशको प्रचलित कानुन विपरीत कुनै पनि सल्लाह दिन हुँदैन । लेखापरीक्षकले आयकर ऐनको बर्खिलाप हुने गरी परामर्श दिएको छ भने उसलाई कारवाही हुन्छ । त्यो कारवाही नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् (आइक्यान) ले गर्छ ।
सरकारले पछिल्लो समय सुरु गरेका प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष, वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बिमालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?सामाजिक सुरक्षाका धेरैजसो कार्यक्रम पहिल्यै सुरु भएका हुन् । कर्णाली रोजगार कार्यक्रम चाहना हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन । पछि राजनीतिक नेतृत्वले ‘यो पैसा सित्तैमा दिएको हो, बाँडिचुँडी खाऔं’ भनिदियो । बाँडिचुँडी खानुपर्छ भन्ने मान्यता नै स्थापित गरिदियो ।
प्रधानमन्त्रीबाट हालै फेरि वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा भएको छ नि ?यो उहाँहरूको घोषणापत्रमै छ । मैले त्यति बेलैदेखि यसको आलोचना गरिरहेको छु । भत्ता भनेको काम गर्ने नागरिकले काम नगर्ने नागरिकलाई दिने पैसा हो । काम गर्ने नागरिकलाई बढी कर लगाएर काम नगर्नेलाई पैसा दियौं भने अर्थतन्त्रमा सन्तुलन बिग्रन्छ । कोही मान्छे निराश भयो भने पनि आर्थिक गतिविधि बढ्दैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले आउँदो वर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्दैछ । हामी कुन अवस्थामा छौं ?एक वर्ष अगाडि हामी संकटापन्न अवस्थामा छौं भन्ने गाइँगुइँ थियो । संकट आउँदैछ । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपका सबै स्रोत सही छैनन् । कतिपय बैंकले सही वा गलत केही नछुट्याई बचत लिइरहेका छन् । बाहिरबाट आएको पैसामा समस्या छ भन्ने व्यापक चर्चाकै कारण रेमिट्यान्स गतिला बैंकहरूले भित्र्याएनन् ।
सम्पति शुद्धिकरणमा छानबिन वा कारबाही किन नभएको होला ?यस विषयमा अहिले सकारात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी हुनथालेको छ । सर्वोच्च अदालतले एउटा स्रोत नखुलेको मुद्दामा रकम फिर्ता गर्न आदेश दिइसकेको छ । रकम फिर्ता हुन नसके पनि एफएटीएफले यो आदेशलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेर्छ ।
घुस सहित विरगंजमा फेरी दुइ जना समातिएका छन ।